अन्तर्वार्ता - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
काठमाडौं, २४ माघ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले यसपाली संसद भवन प्रवेशको मौका पाए । गृहजिल्ला ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव जितेका भट्टराईलाई एमालेभित्र भावी मन्त्रीका रूपमा पनि हेरिएको छ । उनी
काठमाडौं, १७ माघ कलाकारिता क्षेत्रमा चार दशक पूरा गरेका ६२ वर्षिय कलाकार रामचन्द्र अधिकारीले दर्जनौ नेपाली सिनेमा र टेलिसिरियलमा काम गरिसकेका छन् । उनी अभिनित सिनेमामा उनले पाएको भूमिकाबाटै उनलाई
संघर्षबाट सफलतामा पुगेका गोल्ड मेडलिस्ट जोडीको प्रेम कहानी (भिडियो सहित)
१३ माघ २०७४, काठमाडौं त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षा संकाय अन्तर्गत गणित विषयमा सर्वोत्कृष्ट ७३.४० प्रतिशत अंक हासिल गरे बापत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट ४३ औं दिक्षान्त समारोहमा पदक ग्रहण गरेका प्रेमप्रसाद दाहाल
माओ र स्टालिन बीचको अन्तिम कुराकानी
काठमाडौं, ८ माघ जनवादी गणतन्त्र चीनको केन्द्रीय जनसरकारका अध्यक्ष माओ त्से तुङ सन् १९५० को जनवरीमा सोभियत सङ्घको राजधानी मस्को पुग्नुभयो । सोभियत सङ्घमा माओको यो दोस्रो भ्रमण थियो । सो
परिवर्तन खबर, काठमाण्डौ २०७४-०७-०२ बेनी, म्याग्दी : आफ्ना कुरा व्यक्त नगरीकन कति समयसम्म मानिस मौन बस्न सक्छहोला ? एक दिन, दुई दिन वा बढीमा एक हप्ता ! तर यहाँका एक व्यक्ति